Kulankii Ivory Coast iyo Ethiopia oo mashaqo ka dhacday, Garsoore istaagga ka dhacay, mid Korona Fayras ku dhacay & Calanhaye isku bedelay garsoore dhexe – Gool FM
(Ivory Coast) 31 Maarso 2021. Waxaa la joojiyey kulankii isreeb-reebka Koobka qarammadda Afrika ee u dhexeeyey xulalka Ivory Coast iyo Ethiopia, kaddib markii garsoorihii dhex-dhexaadinayey kulankaas uu istaagga ka dhacay.
Ciyaarta ayaa markaas mareysay daqiiqaddii 80-aad, waxaana kulanka 3-1 ku hoggaaminayey Ivory Coast markii Garsoore Charles Bulu uu dareemay xaalad caafimmaaddarro iyo inuu dhacdhacayo taasoo keentay in xiddigaha garoonka ku jiray qaarkood ay garbaha ka galaan.
Waxa uu muujinayaa muuqaal la soo dhigay barta Twitter-ka garsooraha oo si tartiib ah ugu socda dhanka shaqaalaha caafimaadka ka hor inta uusan indhaha isku qabsanin dhulkana ku dhicin.
Garsoore Bulu ayaa lagu daweeyey gudaha garoonka ka hor inta aan bareelo looga dhex qaadin garoonka, iyadoo wararku ay sheegayaan in markiiba Isbitaal loola cararay si baaritaanno dheeri ah loogu sameeyo.
Garsoorahaan ayaa loo soo dalacsiiyay kulankaan adag markii garsoorihii ku qornaa ciyaartaan uu ku dhacay Korona Fayras.
Si kasta oo ay xaaladdu noqoto, Garsooraha Afaraad oo ay ahayd inuu daqiiqadaha ka hartay ciyaarta dhammaystiro ayaa awoodi waayey maadaama uu u dhashay dalka Ivory Coast, taasoo keeni lahayd in lagu eedeeyo inuu u xaglinayo dhanka waddankiisa oo marti loo ahaa.
Wadahadallo badan kaddib caawiyaha garsooraha oo u dhashay Kenya ee Gilbert Cheruiyot ayaa noqday garsooraha dhexe, isaga ayaana dhameystiray daqiiqadihii koobnaa ee ciyaarta ka harsanaa.
Magagascar iyo Niger ayaa kulankii kale ee Guruubkan waxa ay galeen barbaro goolal la’aan ah, taasoo keentay in Koobka qarammada qaaradda Afrika ee bisha Janaayo ay u soo wada baxeen xulalka kulankooda la qasay ee Ivory Coast iyo Ethiopia.
Nemanja Matic oo ku maadeystay xanaaqii Ronaldo & Xulka Portugal, xilli uu sawir qosol leh ku dhajiyey Armaajada Bruno Fernandes ee qolka labiska Man Utd!